Ataovy manokana tsy tokony hanelingelina ny maody amin'ny Android | Androidsis
El aza atao fanelingelenana no nampiharina tamin'ny Android avy amin'ny kinova 8.1 (an'ny Android), rafitra fiasa izay novaina tsindraindray. Io fiasa io dia ahafahanao miala sasatra tsy manelingelina olona, ​​na amin'ny fampiharana na amin'ny telefaona misy torolàlana kely manaraka.
Androany dia te-hilaza aminao bebe kokoa momba izany izahay, na ampifanaraho tsikelikely izany ary safidio hafa handraisana azy, ka azo atao ny manomboka hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Azontsika atao ny mampiasa ny fomba tsy fahazoana antso, fa tsy tonga amintsika ny hafatra, ankoatry ny zavatra maro hafa, safidy ahafahana mamela.
1 Ity no maody tsy manelingelina
2 Ampandehano amin'ny Android io
Ity no maody tsy manelingelina
Ny fametrahana ny findainao mangina dia asa tsotra, matetika ataonao alohan'ny hidirana fivoriana, amin'ny fotoana rehetra tsy tianao hanakorontanana, ankoatry ny zavatra hafa. Aza manelingelina ny maody dia iray amin'ireo vahaolana ary mamela anao handroso ao anatin'ny iray amin'ireo safidy maro eo ambony latabatra.
Ity fomba ity dia ahafahanao mangina ny telefaona, manakana ny antso sy ny fampandrenesana, hahafahanao miala sasatra amin'ireo olona tsy te ho voakorontana. Raha misafidy fotoana iray ianao dia hiverina amin'ny fanjakana nisy azy ny telefaona, noho izany ianao dia afaka mandray antso aorian'ny fiverenanao ara-dalàna.
Ampandehano amin'ny Android io
El Aza manelingelina maody misy amin'ny rafitra Android anayNoho izany, azontsika atao ny mampihetsika azy isaky ny maniry isika ary hahafahan'ny tsirairay mahita io fanjakana io. Matetika izy io dia ao anatin'ny fikirana haingana, mampihetsika io safidy io amin'ny alàlan'ny fanindriana azy indray mandeha rehefa miditra amin'ny fomba torimaso.
Raha te hampandeha azy dia kitiho ny toe-javatra an-tariby> Mandehana any amin'ny feo> Tsindrio ny Aza manelingelina ary ampodino ny maody, azonao atao ny manamboatra rehefa misy ilay maody. Mba hamerenana azy io dia esory amin'ny fikirakira azy ihany, noho izany dia ho azonao idirana izany raha tianao amin'ny fotoana rehetra.
Ny personalization dia tena ilaina amin'ny telefaona Android, saingy azo atao ny manampy maningana raha toa ka te hanana safidy fanampiny azo alaina ao amin'ilay rindrambaiko isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Ataovy miavaka ny Android » Ataovy manokana tsy hanelingelina ny maody amin'ny Android
Ento mamaky ny lalan'ny helo ao Hellrider 3 ny helikopterao
Ahoana ny famadihana ny efijery finday amin'ny fananganana azy fotsiny